Inona no atao hoe taonjato fitaterana tsara? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Torohevitra mitaingina taonjato - referansy feno
Torohevitra mitaingina taonjato - referansy feno
Inona no atao hoe taonjato fitaterana tsara?
Matetika, bisikileta antonony dia afaka mamita amitaingina taonjatoao anatin'ny 7-8 ora, na izany aza dia miovaova arakaraka ny haavon'ny fahaizanao sy ohatrinonafotoanamandany ny bisikileta mandritra ny andro ianao.
Ary izany no taonako feno voalohany, 100.1 kilaometatra. Naharitra ela kokoa noho ny nandrasana.
Niadana be izahay. Saingy azafady, be ny eritreritro. Te handro fotsiny aho izao. (mozika mihomehy) Ary tafaverina izahay.
Mety ho iray amin'ireo taonjato miadana indrindra hatramin'izay. Heveriko fa ny ora rehetra dia sivy ora ary ny fotoana nihetsiketsika dia adiny fito sy sasany, hafainganam-pandeha 13. Tena tsy tsara, fa faly aho tamin'ny taonjato voalohany.
Ary manana eritreritra kely aho. Voalohany indrindra, nahoana aho no nanao an'io taonjato io? Noho izany dia 100 kilaometatra amin'ny bisikileta ny taonjato. Ny antony nanaovako azy dia satria niaraka tamin'ny COVID aho dia lasa adala tokoa ny nijanona tao an-trano ny volana aprily, ny voalohan'ny volana Mey no mety ho ratsy indrindra teo amin'ny eritreritro hoe: 'Izay fotsiny, tsy faly aho.' Nandeha fitsangatsanganana tany Monterey aho ary nandany dimy andro tany Monterey tena tsara, ary nahatsapa ho tsara kokoa aho taorian'izay, ary avy eo niverina tany Vegas ary nilaza hoe: 'Tsara.' Ny zavatra tsikaritro dia hoe na eo aza ny fanazarana fanazaran-tena amin'ny fanazaran-tena sy ny FaceTime miaraka amin'ny namana sy ireo zavatra hafa rehetra ireo dia tsy tiako ny mijanona amin'ny toerana iray.
Satria rehefa any Vegas aho dia matetika ao amin'ny trano fonenako ary indraindray mitaingina bisikileta ary indraindray dia mandinika kely, saingy tsy tiako fotsiny ny mijanona amin'ny toerana iray. Ity dia ity dia ny fianarako avy tamin'ity dia Monterey ity toa tsy mampaninona ahy fa mahafaly ahy ny miala an'i Vegas ka tonga teto niaraka tamina sakaiza iray aho. Niakatra avy tany Las Vegas izahay omaly.
Nandany alina ve isika? Tao amin'ny trano fandraisam-bahiny, rehefa nandao ity maraina ity izahay, dia noheverinay fa ho adiny dimy na adiny enina, ary efa ho sivy. Ary avy eo dia hisakafo hariva isika izao, handry eto indray, ary hiverina rahampitso. Mikasa ny hanao dia hafa aho afaka herinandro vitsivitsy, hiverina any California mba handamina kely fotsiny ny zavatra ary hitazona ny fahadiovako satria tsy ampy ny teny hafa.
Ankehitriny, raha ny momba ny eritreritro taorian'ity taonjato ity dia heveriko aloha fa zava-dehibe ny fiomanana. Mandritra izany fotoana izany dia heveriko fa tsy tsara ny manomana ela loatra. Tadidiko io dia iray io izay nanolorako fikarohana momba ny fandidiana plastika tany Hawaii taona vitsivitsy lasa izay.
Ary nokasaiko ity tontolo andro ity nanodidina ny nosy lehibe izay ahitako ny zavatra manintona rehetra ary mankany amin'ny Valan-javaboary Volkano. Ary naharitra 17 ora ny zava-drehetra. Reraka aho ary tamin'ny farany dia reraka kokoa taorian'ilay fialantsasatra ary nanomboka tamin'izay dia nanapa-kevitra ny ho tonga tampoka foana aho ary tsy hanao drafitra na inona na inona rehefa handeha hanao vakansy satria tiako fotsiny ny hamelana ny zavatra hiseho, fahatsapana faly.
Ary miaraka amin'ny zavatra toy ny bisikileta, heveriko fa tsy izany no vahaolana tsara indrindra satria te hanana làlana ao an-dohanao ianao. Ny làlana azontsika, manokana tsy tiako ny mitondra fiara amin'ny arabe be olona, ​​na amin'ny lalana misy fiara na any amin'ny toerana misy delta lehibe eo anelanelan'ny hafainganam-pandehako sy ny hafainganam-pandehanao. Ka mitondra fiara 15, 20 kilaometatra isan'ora aho ary mitondra fiara 60 izy ireo satria avo lenta ny loza mety hitranga.
Noho izany dia nanomana làlana iray izahay izay nizoranay indrindra tamin'ireo làlan-bisikileta voaaro ireo. Tany ivelany izahay ary somary somary kely ihany, saingy tsy dia be loatra ny ampahany tamin'ny drafitra. Ny zavatra hafa dia nanana drafitra ho an'ny sakafonao aho.
Ka nandeha niaraka tamin'ny sipako aho ary nanontany azy hoe: 'Eh, inona ny drafitrao?' Hoy izy: 'O, hihinana aho rehefa noana.' misotroa rehefa mangetaheta aho, tsy olana lehibe izany. 'Ary nanao betsaka kokoa noho ny nataoko izy.
200 kilaometatra no vitany tao anatin'ny iray andro monja rehefa 20 taona izy. Tsy mbola nanao zavatra mihoatra ny 40 na 45 kilaometatra mandraka androany aho. Noho izany, ny mandeha 40 na 45 hatramin'ny 100 dia dingana lehibe.
Noho izany, nanao fikarohana kely aho taloha ary toy ny tsy maninona, mila kaloria 200 eo ho eo isaky ny mihinana mandritra ny adiny iray aho ary maniry ranoka ampy mba ahazoako manolo electrolyte mankany amin'ny faran'ny dia. Ary amin'ny ankabeazany dia tsara ny vitako tamin'ny ankamaroan'ny dia, afa-tsy ny kilometatra 60-70. Tonga dia nikapoka ny rindrina aho.
Ary tsy afaka nitana ny hafainganam-pandehako aho. Ary ny namako raha ny marina afaka nanintona kely teo alohako. Tamin'ny kilaometatra 75 dia nahazo rivotra faharoa aho ary avy eo dia ranom-boankazo fotsiny nandritra ny sisa nandehanako.
Azoko natao ny nandeha maherin'ny 100 mahery kokoa ary ny namako kosa etsy ankilany, nandona ny rindrina tamin'ny kilometatra 75 na 80 fotsiny izy avy eo ary niharatsy hatrany hatrany. Ary mijery ny jery todika, heveriko fa ny tsy nitovizany dia ny tsy fihinanana sakafo ara-dalàna matetika, tsy nahazo hypoglycemia fatratra, na lany ny fivarotako glycogen. Ary izy, etsy an-danin'izany, dia nisakafo maraina be tany Denny ny maraina, avy eo nisotro alika mafana tamin'ny mitataovovonana ary avy eo vitsivitsy? Bara etsy sy eroa fa tsy nisakafo maraina aho.
Tsy nanana bar fotsiny aho ny maraina, bara iray adiny iray, bara iray adiny iray taty aoriana, bara fotsiny no azoko. Nanana Gatorade aho ary mieritreritra aho fa nandeha indray ny fanomanana? Tsy manam-pahaizana aho, ireo no eritreritro voalohany. Heveriko fa ny hevi-dehibe ezahako hiditra amin'ity fanomanana ity no lakilen'ny zavatra sasany amin'ny fiainanao, saingy tsy tianao ny hihoatra izany.
Tsy te hiomana ela be aho. Tsy te ho be faniriana mihoa-pampana ianao, karazana toy io fialantsasatra Hawaii io izay reraky ny aina aho ary nianiana tamin'ny tenako fa tsy hanao an'izany mihitsy. Amin'ity toe-javatra ity dia heveriko fa manana zavatra kasaiko hatao aho fa angamba misokatra ho amin'ny fahantrana kely fotsiny, angamba izany hoe Ilay tsara indrindra amin'ireo tontolo roa ireo.
Ny eritreritra farany tiako hizara aminareo dia ny hevitra hoe faly amin'ny zavatra ananako aho nanana ity bisikileta ity, ity no bisikiletako voalohany hatreto. Nahazo izany aho tamin'ny taona voalohany nianatra momba ny fitsaboana, 2012. Izany dia ny specialization ambany indrindra azonao.
700 $ vaovao ity izay mora ho an'ny bisikileta an-dàlana. Fantatro fa lafo be izany. Mora be ilay vondrona, tsy tsara mihitsy.
Ny bisikileta dia tsy maivana, miaraka amin'izay ny mametra ahy dia tsy ahy ny bisikileta, izaho izany. Ary ny sipako dia tena manana bisikileta gazy feno tanteraka miaraka amina échanger électricité na écouteur tsy misy tariby ary kodiarana fibre karbonika ary toa izany, tena faran'izay chic Fa mazàna, rehefa mitondra fiara isika dia matetika eo alohany ary anio, amin'ny farany, izaho ihany koa.
ny fomba fanadiovana rojo bisikileta
Napetrako ny dingana ary tsy maintsy niandry azy aho. Ka tsy miteny aho hoe mety na tsy mety ny manavao zavatra. Saingy indraindray aho dia mahatsapa ho saika iharan'ny tsindry mafy mba hahazoana bisikileta tsaratsara kokoa satria ho haingana kokoa aho satria mety kokoa ny mampiasa karbonika fa tsy mitaingina aliminioma satria mety nahita ity bisikileta ity aho nandritra ny valo taona lasa ary te hahita. zava-baovao.
Saingy miaraka amin'izay dia tsapako fa tehezan-tendrombohitra malama ity. Ary heveriko fa mendrika ho ahy ny mifaly fotsiny amin'izay ananako ary manandrana manandratra azy satria tsy mitazona ahy ity bisikileta ity. Taziko ny bisikileta, raha sanatria.
Okay ry zalahy dia izay, reraka aho, noana aho, handeha hisakafo, fitiavana be dia be, hahita anao manaraka.
Inona no tokony hataoko alohan'ny mitaingina taonjato iray?
Miezaha mampitombo ny halavan'ny lava indrindra nataonaomitainginamanatrika nytaonjatomariho tsikelikely. Aza mampitombo ny lava indrindra anaomitainginamanomboka amin'ny 25 kilometatra ka hatramin'ny 70 ao anatin'ny herinandro. SAINGYAzaandramoAzafarafaharatsiny 70 kilaometatramitainginaalohan'ny hanaovana ny tena izytaonjato. Ny hafainganam-pandehanao amin'ny 70 kilometatramitainginadia tokony ho famantarana tsara ny hafainganao amin'nytaonjato.
100 kilaometatra, zato, dia toy ny halaviran'ny benchmark an'ny fanatanjahantena, ary raha nanao iray ianao talohan'ny dia azoko antoka fa tadidinao tsara izany. Na dia hafahafa aza i Emma dia nilaza fa mbola tsy nanao dia 100 kilaometatra izy. - Andraso miandry.
Nataoko ny elanelana, dia io fotsiny, tsy antsoiko hoe 100 kilaometatra, antsoiko hoe 161 kilometatra satria aleoko metric. - Eny ary, 100 kilaometatra, zato taonina, taonina iray, 161 kilometatra, na inona na inona tianao hiantsoana azy, dia dingana lehibe io ary raha mbola tsy nanao izany ianao dia jereo hatrany satria holazainay aminao tsara ny fomba hiomanana. ary avy eo ataovy ny 100 kilaometatra voalohany anao (mozika rock mavitrika) - ahoana no fomba hiatrehanao io fampiofanana io amin'izay? Ny zavatra voalohany tokony hatao rehefa miomana amin'ny dingana lehibe dia ny mifidy daty tianao hanaovana azy. Ary toro-hevitra tsara eto: ny an-tserasera, manaova fikarohana kely ary safidio izay hetsika voalamina tsara mandritra ny 100 kilaometatra voalohany.
Amin'izany no ahazoanao tombony amin'ireo tobin-tsakafo sy ny fanohanan'ny mpamily hafa izay anomezanao toky izay manome anao fankaherezana am-pitiavana ary mazava ho azy fa manampy hizara ny hafainganana - ny zavatra hafa tokony hataonao amin'ny fandaminana ny anao Ny centu voalohany dia tokony handinika ry zareo ny karazana làlana tianao haleha, ny tiako holazaina dia hoe, na dia epic an-tendrombohitra amin'ny metatra an'arivony aza dia toa manasa, mety tsy izany no safidy tsara indrindra ho an'ny atletisma vitsivitsy voalohany. Midika izany fa mora ara-bakiteny kokoa ny mandeha 100 kilaometatra eny amin'ny tany fisaka noho ny any an-tendrombohitra, ka tokony hieritreritra ny hisafidy fiara fanatanjahan-tena izay handeha amin'ny arabe mitovy amin'ireo akaiky anao ianao satria mety ho tsara indrindra amin'izany Driving amin'ity tany ity ianao mety. (mozika mavitrika) - Raha vao nanapa-kevitra ny amin'ny datin'ny fiara 100 kilometatrao ianao dia mila mamantatra ny fotoana tena tokony hiomananao amin'ny andro lehibe.
Ny vaovao tsara dia misy fomba maro samihafa ahafahanao manao izany. Angamba ny tsotra indrindra izay nantsoinay hoe Fausto Coppi Method, nantsoina taorian'ny mpitondra bisikileta italianina 1950s izay tokony ho nilaza hoe: 'Mandeha bisikileta, mitaingina bisikileta, mitaingina bisikileta.' Ary mety ho marina ny azy. - Ary marina fa ho an'ny fahombiazana ary indrindra ny enj Raha mahatratra ny 100 voalohany ianao dia ho fikirakira ny faharetana.
Ka andramo ny mitondra fiara roa na intelo isan-kerinandro. Ireo dia mety ho dia lavitra kokoa, toy ny mandeha na mandeha turbo, ary mamela anao hanao dia lavitra kokoa amin'ny faran'ny herinandro.- Eny, ary ny torohevitra kely eto dia mety hiditra ao amin'ny klioba bisikileta eo an-toerana satria mety ho hitanao fa ilay orinasa an'ny mpamily hafa dia manao ny fandaharam-potoananany somary haingam-pandeha haingam-pandeha kilometatra miaraka amin'ny fanatanjahantena na Gran Fondo fa tena bonus ho zatra mamily fiara eo akaikin'ny hafa izany.
Easy Tiger.- Rehefa manakaiky ny hetsika lehibe ianao dia andramo ampitomboina ny halaviran'ny halaviran'ny fampiofanana ataonao. Toy ny fitsipika ankapobeny, raha azonao atao tsara ny manarona telo ampahefatry ny lalana, dia ho tsara ianao amin'ny fientanam-pon'ny taonjato voalohany anao amin'ny andro - eny, ary ny torohevitra tsara dia ny fanaovanao fiofanana lava indrindra amin'ny manodidina ny 10. handamina andro ka hatramin'ny 2 herinandro alohan'ny andro lehibe.
Ahoana no Ankoatry ny fiatraikan'ny fiofanana dia ho tianao hampiasa izany koa ho toy ny fitsapana ho an'ny hetsika lehibe. Ka te hanandrana ianao ary hahita làlana mitovy amin'izany handehanana ary ny tena zava-dehibe dia ny mitondra sakafo sy zava-pisotro izay tianao hoentina mandritra ny dianao. Satria hahafahanao mampihatra ny paikadinao momba ny sakafo, ny drafitrao dia mety ho afaka mamoaka ketrona na tsipika tsara. (Mozika faly) - fanarenana, eny eny.
hazakazaka bisikileta ram
Amin'ny herinandro alohan'ny 100 kilometatrao dia tianao ho feno sy eo amin'ny dabilio ny fampihetseham-batanao rehetra. Mety halaim-panahy ny hanao fiofanana mikorontana be mandritra ny iray na roa andro alohan'io, fa vao mainka hanasarotra ny fiainana izany amin'ny andro lehibe. Mialà sasatra, matokia fa nahavita ny asa mafy rehetra ianao.
Satria nanao ny asa mafy ianao, sa tsy izany? Marina izany, fa tsy te hijanona tanteraka ianao ny herinandro talohan'io, angamba fitsangatsanganana malefaka iray na roa fotsiny mba hanalefahana ny tongotrao, fa tsy hijanona tanteraka - avy eo azonao atao ny mitaingina hazakazaka iray andro mialoha ny hetsika, raha te hanamarina ny bisikiletanao ianao ohatra, rehefa tsy maintsy nanao dia tamin'ny dia fanatanjahan-tena ianao. Mety ho hevitra tsara io satria raha vao nitaingina bisikileta ianao dia mety ho azonao antoka fa mandeha tsara ara-dalàna ny paosinao sy ny freins, ny zava-drehetra. Fa aza manao mihoatra ny adiny iray sy sasany amin'ny familiana maivana satria te-hihary ny herinao rehetra mandritra ny taonanao ianao. (mozika mavitrika) - Andao hiresaka momba ny lozisialy, sa tsy izany? Inona no mila ataonao ny alina alohan'ny dianao ary ny herinandro talohan'izay.
Andao aloha atomboka amin'ny bisikileta, izay tsy maintsy alamina haingana kokoa noho ny manaraka satria izany no ahafahanao manamboatra azy raha misy ny olana ary avy eo mizaha toetra azy, ary mbola manam-potoana hanamboarana zavatra alohan'ny andro lehibe. Noho izany, ny hany tianao hatao amin'ny bisikiletanao omaly alina dia alao antoka fa madio izy io, ny kodiaranao no tsindry mety, ary nohomboina ny rojonao. manao fanatanjahan-tena voalamina indray, mety ho fanombohana eo am-piandohana, satria raha mihazakazaka mandehandeha ianao amin'ny maraina manandrana manangona zavatra ao am-paosinao, dia izany no fomba fahandro azo antoka hanadino zavatra Mety ho hevitra tsara ny manoratra lisitr'ireo kitanao rehetra mba tsy hohadinoinao nony maraina, ohatra, fenoy ny tavoahanginao ny alina talohan'izay, ataovy ao anaty vata fampangatsiahana, fa soraty amin'ny lisitra iray satria ny manadino ny tavoahanginao dia Flaw mahazatra Tsy misy amintsika Fenoy ny kitaponao miaraka amin'izay rehetra ilainao sy ny sakafonao ka vonona ny handeha ny zava-drehetra.
Raha miresaka sakafo dia aza mikoropaka momba ny fivarotana gliosida ny alina talohan'izay. Raha ny marina, raha misakafo sakafo ara-dalàna fotsiny ianao, ny sakafo voalanjalanja mety misy gliosida kely kokoa noho ny mahazatra izay hahasoa anao. Na izany aza, raha mihinana takelaka paty goavambe ianao dia mety hahatsapa ho kamo be ianao amin'ny maraina. (mozika mavitrika) - Mety halaim-panahy tokoa ny manomboka haingana be.
Miaraka amin'ny hozatra sy fientanentanana rehetra dia azonao atao ny manandrana mitazona mpitaingin-tsoavaly izay somary haingana kokoa noho ianao ary raha manome anao sisin-tany tsara amin'ny haavony ianao dia afaka mikorisa fa rehefa afaka miditra amina fiakarana vitsivitsy ianao, vintana ianao raha hitsoka ny varavaranao manokana. Miezaha manomboka mitondra fiara miadana kokoa noho izay noeritreretinao fa ahafahanao mitondra fiara, ary na dia mahakivy mandritra ny adiny iray na roa aza ity dia hihomehy ianao any aoriana any rehefa mihamatanjaka ny hetsika. Ary raha ny marina, ny mpamily mandroaka anao dia mety hahatratra anao indray mandeha hatramin'ny farany.- Ankehitriny dia niresaka momba izany izahay teo aloha, fa ahoana kosa ny paikadinao momba ny sakafo.
Tena zava-dehibe tokoa izy io satria raha manadino ny mitondra solika ianao rehefa mitondra fiara, na manao fanatanjahan-tena firy aza ianao, dia hihalefaka be, noho izany ny fitsipika ankapobeny dia ny misakafo kely sy matetika - isaky ny 40 minitra na mihoatra dia tsara Rule of thumb iray fa tokony eo amin'ny lafiny azo antoka foana ianao. Ary avy eo izay entinao, ny sakafo ara-panatanjahantena dia tsara, mora levona, mora entina, fa raha efa nandeha bisikileta efa ela ianao dia mety ho hitanao amin'ny farany fa marary kely ianao ary mety tsy hipetraka ny vavony koa. Ka ento miaraka aminao ny tena sakafo, ka angamba sandwich dibera voanjo na voanjo na flapjack, fa na inona na inona ataonao dia alao antoka fa mampihatra ny paikadinao mihinana ianao alohan'ny andro satria tena mila mampiofana ny vatanao amin'ny ingesting sy mandevona sakafo ianao eny an-dalana ianao.- Eny, ary tena ilaina izany mba tsy hanadinoanao ny paikadinao momba ny sakafo mandritra ny andro, ary, na eo aza ny fitaintainanana sy ny fientanam-po, aza hadino ny mihinana mandritra ny ora vitsivitsy satria nitranga tamin'ny ankamaroan'izy ireo izany. Heloko izany .- Ary rehefa noana ianao dia tara loatra matetika, ka tsarovy ny mihinana kely ary matetika mba tsy ho noana.
Etsy ankilany, aza mijanona isaky ny roapolo minitra ary mandany sakafo folo minitra, izay nataoko fony aho nanao fanazaran-tena voalohany, raha ny marina dia nihinana flapjack be loatra aho ka nahatsapa fa narary tokoa tamin'ny faran'ny hetsika. (mihomehy) - Ara-drariny loatra, fa ny fihinanana flapjack isaky ny 20 minitra dia ny fomba andalovako ny ankamaroan'ny andro - Tokony hanana metabolisma avo lenta ianao - Eny, na inona na inona, andao daholo ireo fanomanana ireo, ireo drafitra rehetra ireo ary ireo paikady rehetra ireo, tsy maintsy tadidio fa ny mihazakazaka 100 kilaometatra dia zava-bita mahafinaritra voalohany ary ny zavatra faharoa azonao atao mankafy mandritra ilay hetsika na, angamba ny tena zava-dehibe dia ny mijery any aoriana sy mankafy azy avy eo. Azonao atao ve ny mahatadidy ny 100 kilaometatra voalohany anao? - Ie, heveriko fa ny Polkadot Challenge ary eny, nampidi-doza aho, tena nihinana flapjack mahatsiravina tokoa aho.
Heveriko fa nandany adiny roa tao amin'ny tobin'ny mpihinana aho ka nihinana flapjack ary nahatsiaro ory. Tsy maintsy nihinana kaloria betsaka kokoa noho ny nandoroako an'io zavatra io aho - Tena izany? Ka ny ahy voalohany dia tamin'ny hazakazaka iray ary tsy nandeha tsara izany, fantatrao? , Nitondra 100 kilaometatra aho saingy indrisy fa 117 kilaometatra ny hazakazaka ary tsy maintsy nijanona aho taorian'ny 111 kilaometatra satria notsofiko mafy ny varavarako, eny. - Tena enina kilaometatra.
Tsy afaka nanao enina kilaometatra? Eny, raha nankafizinao ity lahatsoratra ity azafady manomezà ny ankihiben-tànany ary raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny paikady ara-tsakafo ianao satria mety ho sarotra be, sa tsy izany? Ary misy zavatra betsaka azonao ianarana, kitiho ny lahatsoratra eto ambany.
Andro firy no miala sasatra alohan'ny fitsangatsanganana zato taona?
Tokony hanao adia lavitra, manodidina ny 80% ny halaviran'ny tanjonao 4andro talohan'izayny tena anaomitaingina, ary avy eoHAFAivelan'nybisikiletaho an'ny 3andro. Izany dia manome torimaso ny vatanao fa ho avy ny fanatanjahan-tena matotra, ary avy eo aHAFAvanim-potoana hananganana azy.
halavirana triathlon sprint
Ahoana no tokony hataoko am-pandehanana mandritra ny zato taona?
entanazavatra mahafinaritra ovaina ho tonga avy hatrany aorian'nymitaingina. ihany koaMitondràpalitao ranonorana sy fitaovan'ny toetrandro rehetra miaraka aminao hatramin'ny voalohany, ary alao antoka fa manana fantsona roa sy paompy roa ianao, rano roa tavoahangy ary sakafo mandritra ny andro.bisikiletana dia hisy tsakitsaky aza amin'ny làlana.
Ny isan'ny kaloria entinao amin'ny fampihetseham-batana roa dia miankina amin'ny hamafin'ny faharetanao sy ny halavan'ny fotoana anaovanao azy. Amin'ny ankapobeny,mihazakazakamandoro kaloria bebe kokoanoho ny bisikiletasatria mampiasa hozatra bebe kokoa izy io. Na izany aza,bisikiletamalefaka kokoa amin'ny vatana, ary mety ho vitanao ela kokoa izanynaHaingankaingananoho nyianao dia afakamihazakazaka.
Sarotra ve ny bisikileta 100 kilaometatra?
ny-jato-bisikileta kilometatraFanamby lehibe ny mitaingina, saingy amin'ny alàlan'ny programa fanofanana mety, dia lavitra tsy ho vita mihitsy izany. Mametraha lasibatra eny an-dalana ary kendreo antoka fa miovaova ny fomba fomba fiasa, ary afaka mandresy ny lalana ianao!
Tokony hitondra ny andro aorian'ny zato taona ve ianao?
miankina amin'nytaonjato, mafy ahoanaianareomandehana, aryianareofahasalamana. RAHAianareotena marotoa nytaonjatona raha manana fiakarana an-tapitrisany metatra na lava indrindramitaingina anaoizay vitany teo aloha dia 15 kilometatra avy eoianareomety te handray aandrona roa miala avy eo.03.09.2004
Afaka mivezivezy 100 kilaometatra ve aho raha tsy misy fiofanana?
Tadidio, nyAzany100, tsy mila izany ianaoTrainingamin'ny fanaovana100 arivoisaky ny 75-80 isan-jato dia fiomanana ampyTSYmanampy boky be loatra. Ny ara-batanafampiofanana tokonyraiso ireto hevitra manaraka ireto: manokana: Ny anao100-kilometatra an-tongotrahandeha ho havoana? diamitainginahavoana amin'ny 60-milers anao!
Tokony mitaingina andro alohan'ny zato ve ianao?
Taper roa herinandro dia mety indrindraalohan'ny fitsangatsanganana zato taona. Ka rahaianareonandeha 80 kilaometatra tao anatin'ny enina andro voalohany tamin'ny herinandro faharoa ka hatramin'ny faranyalohan'nynytaonjato,mitainginamanodidina ny 50 kilaometatra ao anatin'ny enina andro faranyalohan'nyny hetsika, makaindray androeny tanteraka.
Ny fiofanana mitaingina abisikileta 100 kilaometatraTsy dia hentitra loatra, ary tsy miankina amin'ny fitaizam-batana noho ny mihazakazaka hazakazaka hazakazaka. Voalaza fa mbola tena izanymafyzavatra tokony hatao, ary tokony hiasa mifanaraka amin'izany ianao. Ny dia lava indrindra nataoko talohan'ny nitaingenako zato dia 80an'arivony.
Ahoana no fomba hanararaotana ny diany voalohany?
Ity misy fomba hanararaotana tsara ny fitsangatsanganana tamin'ny taonjato voalohany ary hiantohana fa te hisoratra anarana avy hatrany amin'ny iray hafa ianao. Mitombo tsikelikely. Atombohy ny famelarana ireo dianao lava dimy na folo kilometatra isan-kerinandro mandra-pahatonganao mitaingina 75 kilaometatra.
Impiry aho no tokony mitaingina ny bisikiletako alohan'ny fitsangatsanganana taonjato iray?
Atombohy ny famelarana ireo dianao lava dimy na folo kilometatra isan-kerinandro mandra-pahatonganao mitaingina 75 kilaometatra. Aza manandrana mikorisa amin'ny mileage minitra farany ao anatin'ny tapa-bolana alohan'ny hetsika - te-hiala tampoka ianao rehefa manakaiky ny andro fitsangantsanganana. Omeo fitiliana haingana ny dianao.
Inona no tokony hohaniko mandritra ny 100 taona?
Fitsangatsanganana an-jato - na mitaingina lavitra hafa, noho izany - tsy haingam-pandeha. Zava-dehibe ny mampandeha ny tenanao sy mitaingina miorim-paka, miala sasatra rehefa mandeha. Mandritra ny diany mihitsy, ny lakileny dia ny misakafo matetika, araka izay itiavanao sakafo matanjaka be hitazomana ny vatanao.